जान्नुहोस् यस्ता छन् स्याउ र यसको सेवन गर्दाका फाइदाहरु
सेप्टेम्बर 28, 2018 साइन्स इन्फोटेक	9 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
अध्ययनका अनुसार दैनिक स्याउ खाँदा स्वस्थ महिलाको यौन क्षमता बढ्छ । स्याउमा पोलिफेनाल्स र एन्टीआक्सिडेन्ट हुने गर्दछ । जसले यौनअंगमा रक्तप्रवाह बढाउन सहयोगगर्दछ । यसबाट महिलामा कामोत्तेजना थप बढाउने गर्दछ ।
शोधकर्ताहरुले पाए कि जुन महिलाले हरेक दिन एक वा दुई स्याउ खाने गरेका थिए, उनीहरुको ल्युब्रिकेशन र ओभर अल सेक्स्युअल फंक्शन बढी उत्तम थियो । स्याउमा फ्लोराजिन पनि हुने गर्दछ जुन एउटा आम फिस्टेस्ट्रोजेन हो । यो संरचनात्मक रुपबाट एस्ट्राडियोलजस्तै हुने गर्दछ । एस्ट्राडियोल महिला सेक्स हर्मोन हो जसले कामुकता बढाउन सहयोग गर्छ । (एजेन्सी)
← युरेनियम (Uranium) भनेको के हो ?
यार्सागुम्बा र यसको महत्व →
9 thoughts on “स्याउ र यसको फाइदाहरु”
Pingback:यस्ता छन् थाहा पाउनुहोस् सिस्नु खानुका फाइदै फाइदाहरु